प्रत्येक सदस्यताबाट १००% आय प्राप्त गर्नुहोस्
सदस्यता लेखकलाई समर्थन गर्ने र विशेष प्रकाशनहरू र स्ट्रिमहरूमा पहुँच गर्ने एक तरिका हो।
जब एक प्रयोगकर्ताले भुक्तान सदस्यता पुष्टि गर्दछ, तिनीहरूले निश्चित मासिक भुक्तानी गर्छन्। सशुल्क सदस्यता प्रणालीमा कुनै कमीशनहरू समावेश छैन, त्यसैले तपाईं सदस्यता योगबाट १००% पाउनुहुनेछ।
किन यो लेखकहरु लाई लाभदायक छ?
कमीशनहरू बिना १००% भुक्तानी
एक सदस्यताबाट प्रति महिना $ 40 सम्म भुक्तान
लचिलो स्तर सेटिंग
लेखकहरुका लागि किन यो सन्तोषजनक छ?
बोनस: स्वतः अनुवादकको साथ च्याटहरू
बोनस: धेरै क्लिकहरूमा द्रुत सदस्यता
१० भन्दा बढी भुक्तानी विधिहरू (तपाईंको देशमा निर्भर गर्दै)
मिठो दाँत छ? क्यामेरामा मिठाई खानका लागि सिक्काहरू पाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई देखाउनुहोस् तपाईंको कार्ब कति मनपर्दछ!
न्यूनतम फिर्ता रकम १० डलर हो। VISA, मास्टरकार्ड, Paypal, Payoneer, Yandex, QIWI, SEPA, Bitsafe सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा पैसा फिर्ता लिन एक इनभ्वाइस प्राप्त गर्नुहोस्।